Top 3 Lugood Hurdada Saacad e
> Resource > Lugood > Top 3 Lugood Hurdada Saacad
Kuwii ku caashaqi jiray badan oo music ma noolaan karaan iyagoo aan music. Sidaas xataa ay seexan, ay u baahan yihiin hurdo si Gurtida ay. Waa caado wanaagsan, sababtoo ah waxaa laga yaabaa inaad tayo sare oo hurdo ah. Halkan 3 hurdo saacad Lugood ayaa lagu bilaabaa. Waxay dhigi doonaa adiga iyo Mac labadaba in ay seexdaan ka dib dhamaadka music.
Lugood Saacad - Mac Dashboard Widget
Tani muraayada Mac OS X widget ha aad ku raaxaysato dhagaysiga muusigga, buugaag maqal ah, podcasts, raadiyaha ee Lugood ilaa iyo koobabkii ugu dhamaato. Ka dib markii lagu rakibay, u isticmaalaan kaliya bar slider ah in ay horyaalka Ingariiska iyo riix badhanka cagaarka ah si ay u bilaabaan saacadda.
Iyadoo fursado dheeraad ah, waxa kale oo aad adkaysan kari waayay QuickTime, DVD Player iyo saarta Mac galay hab hurdo.
Lugood Hurdada Saacad - Yahoo Widget
Tani waa saacad hurdo Lugood Yahoo Widget ku salaysan lacag la'aan ah. Ka dib markii ay muddo waqti loo qoondeeyey oo dhamaystiran, waxaa Derewalku Lugood si aad ku riyoon karaan inta ka dhiman habeenka. Si aynu Lugood dib aad ilaa waqti cayiman, waxaad u baahan tahay widget kale Yahoo loo yaqaan Lugood Alarm Clock. Eeg more Lugood widgets ka Yahoo.
iSleep - Hurdada Saacad iyo Saacad Alarm
Tan waxaa ku bixisay ($ 9) saacad hurdo Lugood leh dheeraad ah , tusaale ahaan, iyadoo la isticmaalayo DVD ah halkii ay ka ciyaaro music, sugaya filimka si loo soo afjaro ka hor inta aadan seexan, iwm Haddii aad Mac waa buuq badan, sidoo kale aad Mac in ay seexdaan, waayo, asalka xasilloon oo tamarta badbaadiyo.
Download iSleep halkan